» खरानी घसेर हिँडेका माधव नेपालले धेरैको जिन्दगी बर्बाद पारे : केपी ओली
खरानी घसेर हिँडेका माधव नेपालले धेरैको जिन्दगी बर्बाद पारे : केपी ओली
माओवादी कार्यकर्तालाई प्रश्न – प्रचण्डलाई घाँस हालेर के पाइन्छ ? मन्त्री पाइन्छ !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले व्यक्तिगत इगो, व्यक्तिगत अहंकार, ईर्ष्याभाव र कुण्ठाबाट ग्रसित भएर माधव नेपालले अनेकौंका जिन्दगीसँग खेलेको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले काठमाडौंले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न घरमा आगो लगाएर, खरानी धसेर तन्नम् भएर, तीर्थयात्रामा हिँडेको बताए । पछि लागेर हिँडेका मान्छेको जिन्दगी नेपालले बर्बाद बनाएको ओलीले आरोप लगाए । ओलीले माधव नेपालसँग भएका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीमै फर्किन आग्रह गरे ।
ओलीले भने, ‘माधव नेपालले अलमल्याएका, झुक्याएका, भ्रममा पारेका साथीहरु फर्किनुस् पार्टीमा । कार्यकर्ताहरु फर्किनुस् । झुक्किएका साथीहरु फर्किनुस् । तपाईंहरुको जिन्दगीसँग माधव नेपालले जुन खेल खेल्नुभो, बहुतै डरलाग्दो छ ।’
ओलीले माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई पनि एमालेमा आउन आग्रह गरे । उनले एमाले एकीकृत पार्टी भएको दाबी गर्दै प्रचण्डको पछि नलाग्न सुझाव दिए । ओलीले प्रचण्डको सेवक भएर नबस्न आग्रह गर्दै पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्न एमालेमा आउन आग्रह गरे । ओलीले भने ‘तपाईंहरू पार्टीको कार्यकता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता ? प्रचण्डलाई घाँस हालेर के दिन्छन् ? मन्त्री दिन्छु भन्थे अहिले त त्यो पनि दिन छाडे । दुई महिना भइसक्यो अहिले मन्त्री पनि बनाएको छैन ।’
ओलीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेर जनतालाई नजिस्काउन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने तत्वहरुको बहिर्गमनपछि एमाले एक ढिक्का बनेको छ : केपी ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले एकैपटक ६ हजार वडा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै
आफुले चाहे वर्तमान सरकार एक हप्तामा ढाल्न सकिन्छ : एमाले अध्यक्ष ओली